सलमानलाई पाउन यस्तो हर्कत समेत गरेकी थिइन् ऐश्वर्याले, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सलमानलाई पाउन यस्तो हर्कत समेत गरेकी थिइन् ऐश्वर्याले
एजेन्सी । बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान र अभिनेत्री ऐश्वर्या रायको प्रेमसम्बन्धको बारेमा थाहा नपाउने सायदै कोही होला । त्यही प्रेमसम्बन्धमा जेपनि गर्न पछि नहट्ने यी दुई अव एक अर्कालाई देख्न पनि चाहँदैनन् । बलिउडमा सुन्ने गरिन्छ कि सलमानले ऐश्वर्याको प्यारको लागि जेपनि गर्न पछि हटेनन् । तर कमैलाई मात्र थाहा छ कि सलमानको माया पाउनकोलागि ऐश्वर्याले के मात्र गरिनन् ।
संजय लीला भंसालीले सलमान खानको प्रस्तावमा फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ मा ऐश्वर्यालाई डेब्यू गराएका थिए । ‘हम दिल दे चुके सनम’ को शूटिंगको क्रममा ऐश्वर्या राय र सलमान खानबीच प्रेम झ्याङिगएको थियो । ऐश्वर्या सलमानलाई भेट्न उनको घरसमेत जान थालिन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ऐश्वर्याको माता पिता यी दुईको सम्बन्धमा खुशी थिएनन् । ऐश्वर्यालाई जब परिवारले सलमानसँग सम्बन्ध टुटाउन दबाब दियो तब आफ्नो परिवारको घर छोडेर हिँडेकी थिइन् । ऐश्वर्याले सलमानको प्रेमको लागि आफ्नो घरपरिवार समेत छोडिदिएकी थिइन् ।